Moments leh saaxiibo 24
Uma muuqato macquul in labo ama in ka badan oo fikrado is diidan ahi ay sax u noqon karaan wixii run ah. Maxay tahay fikrado badan oo ku saabsan dhibaatooyinka ama waxyaabaha qaarkood? Sidee haddaba aan u sheegi karnaa ra'yi xaqiiqa ah iyo waxa runta ah?
Hal Xaqiiq ah oo aan macquul aheyn lama cadeyn karo ama looma muujin karo maanka aadanaha, maanka bina aadamkaana ma fahmi karo cadaymahan ama muujinta hadii ay suurta gal tahay in la bixiyo, waxkastoo aan ka badneyn sharciyada, abaabulka, iyo shaqada cirka oo la cadeyn karo inuu qarka u saran yahay. shinnida, ama wax ka badan tadpole ayaa fahmi kara dhismaha iyo qulqulka dhaqdhaqaaqa. Laakiin inkasta oo maanka bani’aadamka uusan fahmi karin Xaqa runta ah ee ku jira nuqulada, hadana waxaa suuragal ah in la fahmo wax run ah oo la xiriira wax kasta ama dhibaato ka jirta adduunka la soo bandhigay. Runtu waa shay sida ay tahay. Waa macquul in maskaxda bini-aadamka si weyn loo tababbaray loona horumariyo oo laga yaabo inay ogaato waxkastoo ay yihiinba. Waxaa jira saddex marxaladood ama darajo oo ay tahay in maanka bani’aadamka laga gudbo, kahor intuusan ogaanin waxkasta sida ay tahay. Wadanka ugu horeeya waa jaahil, ama mugdi; tan labaad waa figrad, ama aaminaad; saddexaad waa aqoon, ama waa run sida ay tahay.
Jaahilnimadu waa xaalad mugdi maskaxeed maskaxda ku haysa ay wax u dhimi karto shay, laakiin aan awood u lahayn inay fahanto. Marka jaahilnimada maskaxdu ku dhex jirto oo ay maamusho dareenka. Dareenka ayaa aad u daruur ah, midab iyo jahwareer maskaxda ku haya in maskaxdu aysan awood u lahayn inay kala soocaan daruuraha jaahilnimada iyo waxa ay tahay. Maskaxda ayaa weli ah mid aan aqoon illaa iyo inta la xakameynayo, lagu hago laguna hago dareenka. Si looga baxo mugdiga jahliga, maskaxdu waa inay nafteeda ka fiirsataa fahamka waxyaabaha sida lagu kala soocay dareenka waxyaabaha. Marka maskaxdu isku daydo inay wax fahanto, sida lagu kala soocay garashada shayga, waa inay fikirtaa. Fikirku wuxuu keenaa maskaxda inay ka gudubto gobolka jaahilnimada mugdiga galay fikirka gobolka. Gobolka fikirku waa taas oo maskaxdu wax ku dareento shay iskuna dayo in la ogaado waxa ay tahay. Marka maskaxdu nafteeda wax ka qabato wax kastoo dhibaato ama dhibaato ah waxay bilaabeysaa inay gooni isu geyso sidii qof fakir ah iyo waxa ay quseyso lafteeda. Kadib waxay bilaabaysaa inay fikradaha ka dhiibato waxyaabaha. Fikradahaas kama aysan hadlin intii ay ku qanacsanaayeen gobolka jaahilnimada, wax kasta oo intaa ka badan kuwa caajisnka ah ama maskax furfuran ayaa naftooda ku mashquulsan fikradaha ku saabsan waxyaabaha aan quseynin dareenka. Laakiin waxay yeelan doonaan fikrado ku saabsan waxyaabaha dabiicadda xasaasiga ah. Ra'yi waa gobolka ay maskaxdu si cad u arki karin run, ama sheyga sida ay tahay, sida ay uga duwan tahay dareenka, ama walxaha sida ay u muuqdaan. Mid ka mid ah fikradaha ayaa sameeya waxa uu rumeysan yahay. Waxyaabaha uu rumeysan yahay waa natiijooyinka fikradihiisa. Fekerku waa dunida dhexe ee u dhexeeya mugdiga iyo iftiinka. Waa adduunyada lagu arko dareenka iyo walxaha beddelaya ee la socda iftiinka iyo hooska iyo ka tarjumida walxaha. Xaaladda fikradeed ee maskaxdu ma kala saari karto ama ma kala saari karto hadhka shayga ku tuuraya, mana awoodo inuu u arko iftiinka mid ka duwan hadhka ama shayga. Si looga baxo xaalada fikirka, maanka waa inuu isku dayaa inuu fahmo farqiga u dhexeeya iftiinka, sheyga, iyo milicsigiisa ama hooskiisa. Marka maskaxdu sidaas isku daydo waxay bilaabaysaa inay kala soocdo fikradaha saxda ah iyo fikradaha qaldan. Fekerka saxda ahi waa awooda maskaxda go'aamisa sida ay ugu kala duwan yihiin waxa iyo waxa u muuqda iyo hooskiisa, ama in waxa loo arko sida ay tahay. Fikrada qaldan ayaa ah khaladka fikirka ama hooska shay shayga laftiisa. In kasta oo xaaladda gobolka fikirka maskaxdu u arki karin iftiinka mid ka duwan fikradaha saxda ah iyo qaldan, ama walxaha sida ka duwan aragtidooda iyo hooskooda. Si loo yeesho fikradaha saxda ah, qofku waa inuu maskaxda ka xoreeyo nacaybka iyo saameynta dareenka. Dareenka ayaa midab leh ama u saameeya maskaxda sidii ay u soo saari lahaayeen nacayb, halkaas oo nacaybku jiro ma jiro fikrad sax ah. Fekerka iyo tababarka maskaxda ee fikirka waa lama huraan in la sameeyo fikradaha saxda ah. Markii maskaxdu sameysay fikrad sax ah oo ay diido inay u ogolaato caqliga inuu saameyn ku yeesho ama ka necbaado maskaxda ka soo horjeedka fikirka saxda ah, oo uu haysto fikradaha saxda ah, dhib ma leh haddii ay ka hor imaaneyso qofka mawqifkiisa ama danaha qofka naftiisa ama asxaabtiisa, iyo ku dhegan yahay fikirka saxda ah ka hor iyo ka doorbidida waxa kale oo dhan, ka dib maskaxdu waxay u gudbi doontaa waqtiga aqoonta. Maskaxdu markaa ma yeelanayso fikrad ku saabsan shay mana ku jahwareereyso fikradaha is khilaafsan, laakiin waxay ogaan doontaa in waxaasi yahay sida ay tahay. Mid wuxuu ka gudbaa gobolka fikradahiisa ama waxa uu rumeysan yahay, iyo gobolka aqoonta ama iftiinka, adoo u haysta wax uu og yahay inay run ka tahay doorbidista waxa kale oo dhan. Wuxuu bartay inuu ku noolaado aqoon ahaan halkii uu ugu noolaan lahaa wixii ka horreeyay, jahliga iyo fikirka.
Maskaxda waxay bartaa inay ogaato runta waxkastoo ku saabsan iyada lafteeda sheygaas. Xaaladda aqooneed, ka dib markay bartay inay ka fikirto oo ay awooddo inay ku gaarto fikradaha saxda ah xorriyadda ka timaada nacaybka iyo fekerka sii wadata, maskaxdu waxay u aragtaa waxkastoo ay tahay wayna ogtahay inay tahay sidii ay tahay iftiin, taas oo ah iftiinka aqoonta. Intii lagu jiray gobolka jaahiliinta wax aan macquul aheyn in la arko, iyo iyada oo gobolka fikradaha ma aysan arag iftiinka, laakiin hadda gobolka aqoonta aqooneed maskaxdu waxay aragtaa iftiinka, iyadoo lagu kala soocay shay iyo waxa ka tarjumaya iyo hooska. . Iftiinka aqoontaani macnihiisu waa in runta wax la yaqaan, in wax kasta oo la ogyahay ay yihiin sidii ay run ahaantii yihiin oo ayna u muuqan markay muuqdaan markay tahay jahwareer ama jahwareer xagga fikradaha ah. Iftiinka aqoonta dhabta ah looma qaldami doono nalalka kale ama nalka oo maskaxda looga yaqaan jaahilnimo ama ra'yi. Iftiinka aqoonta lafteedu waa caddeyn ka sarreysa su'aasha. Marka tan la arko, waa sababta oo ah fikirka waxaa lagu dhammeeyaa aqoon, sida marka qofku wax ogaado waxa uusan ku sii dhex soconin hawsha culus ee fakarka ee wixii uu hore u falanqeeyey oo hadda yaqaan.
Haddii qof galo qol mugdi ah, wuxuu dareemayaa sida uu qolka uga jiro oo waxaa dhici karta inuu ku turunturoodo waxyaabaha ku jira, oo uu naftiisa ku dhaawaco alaabta guriga iyo derbiyada, ama isku dhacaan kuwa kale ee u guuraya sidii isaga laftiisa qolka. Tani waa gobolka jaahilnimada ay ku nool yihiin jaahilku. Kadib markuu qolka ku wareego indhihiisu waxay barteen gudcurka, iskuna dayaan inuu awood u yeesho inuu kala sooco dulucda dulucda shayga iyo tirooyinka dhaqdhaqaaqa ee qolka. Tani waxay la mid tahay ka gudbida gobolka jaahilnimada una gudubto gobolka fikradaha halkaasoo ninku uu awood u leeyahay inuu kala saaro shay aad uga yar shay kale iyo inuu fahmo sida uusan ula dhacsaneyn tirooyinka kale ee socda. Aynu soo qaadno in midka xaaladdan ku jira uu hadda isku qarin karo nal ilaa hadda la qabtay oo uu ku qariyey shakhsigiisa, oo aan u malayno in uu hadda qaatay iftiinka oo uu ku shidmayo qolka. Marka uu ku dul rogayo qolka ayuu kala wareegaa laftiisa oo keliya laakiin sidoo kale wuu wareersadaa oo xanaajiyaa tirooyinka kale ee qolka ku jira. Tani waxay lamid tahay ninka isku dayaya inuu arko ashyaa'da sida ay uga kala duwan yihiin wixii ay isaga ugu arkeen inuu yahay. Maaddaama uu u iftiiminayo iftiinkiisa waxyaabaha waxay umuuqdaan kuwo ka duwan sidii ay ahaayeen, iftiinka iftiinka ama wareeriya aragtidiisa, sida aragtida dadku ku jahwareerto fikradaha is khilaafsan ee naftiisa iyo kuwa kale. Laakiin inta uu si taxaddar leh u baarayo shay iftiinkiisu ku dul yaallo oo aanuu dhibsan ama jahwareerin nalalka kale ee tirooyinka kale ee hadda tooshmaya, wuxuu baran doonaa inuu arko shay kasta sida ay tahay, oo wuxuu ku bartay sii wadidda baaritaanka qalabka. sida loo arko shay kasta oo qolka jooga. Aynu hadda ka soo qaadno inuu awood u leeyahay isaga oo baaraya waxyaabaha iyo qorshaha qolka si loo ogaado furitaanka qolka la xiray. Isagoo sii wata dadaalkiisa wuxuu awood u siiyaa inuu ka saaro waxa carqaladeeya furitaanka iyo goorta uu iftiinka daadku galo qolka wuxuuna ka dhigayaa wax muuqda oo dhan. Haddii uusan indha indheeynin daadadka iftiinka dhalaalaya oo uusan mar dambe xirmin furitaanka sababta oo ah iftiinka ku soo qulqulaya indhihiisa, oo aan iftiinka aqoon, wuxuu si tartiib tartiib ah u arki doonaa dhammaan walxaha qolka iyada oo aan si tartiib tartiib ah looga socon. ka sarreeya mid kasta oo gooni gooni ah iyadoo laydhkiisa raadinta ah. Iftiinka qolka daadanaya wuxuu la mid yahay iftiinka aqoonta. Iftiinka aqoonta ayaa wax walba garan kara siday yihiin, oo iftiinkaas ayaa wax kasta lagu gartaa inuu yahay.